Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Filipaị 1:1-30
Pọl kelere Chineke; ekpere o kpere (3-11)
E kwusakwuru ozi ọma n’agbanyeghị nsogbu (12-20)
Ọ bụrụ na m dị ndụ, ọ bụ Kraịst ka m na-adịrị ya (21-26)
Na-akpanụ àgwà otú kwesịrị ozi ọma (27-30)
1 Pọl na Timoti, ndị ohu Kraịst Jizọs, na-edetara unu ndị nsọ niile ha na Kraịst Jizọs dị n’otu, bụ́ ndị nọ na Filipaị,+ akwụkwọ ozi, nakwa ndị nlekọta na ndị ohu na-eje ozi:+ 2 Ka Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst meere unu amara, meekwa ka udo dịrị unu. 3 Ana m ekele Chineke m mgbe niile ma m cheta unu 4 n’arịrịọ niile m na-arịọsi ya ike. M na-eji ọṅụ arịọ ya arịrịọ ọ bụla m na-arịọsi ya ike maka unu niile+ 5 n’ihi ihe ndị unu merela ka ozi ọma wee na-aga n’ihu malite n’ụbọchị mbụ ruo ugbu a. 6 N’ihi na obi siri m ike na onye malitere ọrụ ọma n’ime unu ga-arụzu ya+ ruo n’ụbọchị Kraịst Jizọs.+ 7 Ebe ọ bụ na unu dị m n’obi, ọ dị mma na m na-echere unu niile ụdị ihe a. Unu so m enweta amara Chineke meere m n’ihi na unu nyeere m aka na mkpọrọ a tụrụ m,+ nyekwara m aka n’ịgbachitere ozi ọma nakwa n’ịgbalị iji ihe iwu kwuru kwado izisa ozi ọma.+ 8 N’ihi na Chineke ga-agbara m akaebe na agụụ ịhụ unu na-agụsi m ike n’ihi na m hụrụ unu n’anya otú Kraịst Jizọs hụrụ unu n’anya. 9 Ihe m na-ekpekwa n’ekpere bụ ka ịhụnanya unu na-abakwu ụba,+ ka unu na-amatakwu uche Chineke nke ọma+ ma na-aghọtacha uche ya;+ 10 ka unu na-achọpụta ihe ndị ka mkpa,+ ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ ma ghara ịna-eme ka ndị ọzọ zọhie ụkwụ*+ ruo ụbọchị Kraịst; 11 nakwa ka Jizọs Kraịst nyere unu aka ka unu na-amịju mkpụrụ ezi omume amịju,+ ka e wee nye Chineke otuto ma jaa ya mma. 12 Ụmụnna m, achọrọ m ka unu mara na ihe mere m emeela ka e kwusakwuo ozi ọma, 13 nke mere na ndị niile bụ́ Ndị Nche Eze Rom nakwa ndị ọzọ niile amarala+ na a tụrụ m mkpọrọ+ n’ihi Kraịst. 14 Mkpọrọ a tụrụ m emeela ka ọtụtụ ụmụnna ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi nwee obi ike. Obi na-esikwu ha ike ikwu okwu Chineke n’atụghị egwu. 15 N’eziokwu, ọ bụ anyaụfụ na ekworo mere ụfọdụ ndị ji na-ekwusa ozi ọma gbasara Kraịst, ma ndị ọzọ ji ezi obi na-ekwusa ya. 16 Ọ bụ ịhụnanya mere ndị nke nwere ezi obi ji na-ekwusa gbasara Kraịst, n’ihi na ha ma na a họpụtara m ka m gbachitere ozi ọma.+ 17 Ma ndị nke ọzọ na-eme ya n’ihi esemokwu. Ha ejighị obi ọcha na-ekwusa ya n’ihi na ha chọrọ ịkpatara m nsogbu na mkpọrọ a tụrụ m. 18 Gịnị meziri? Otú ọ bụla e si na-ekwusa ya, ma è ji aghụghọ na-ekwusa ya ma è ji ezi obi na-ekwusa ya, ihe bụ́ isi bụ na a na-ekwusa gbasara Kraịst. Ana m aṅụrịkwa ọṅụ na a na-ekwusa ya. N’eziokwu, m ga na-aṅụrị ọṅụ, 19 n’ihi na ama m na a ga-azọpụta m n’ihi arịrịọ unu na-arịọsi ike+ nakwa n’ihi na mmụọ Jizọs Kraịst na-enyere anyị aka.+ 20 Obi siri m ike, enwekwara m olileanya na a gaghị eme ka ihere mee m n’ụzọ ọ bụla. Ma ebe ọ bụ na ụjọ ikwu okwu anaghị atụ m, m* ga-eto Kraịst ugbu a otú m na-emebu mgbe niile, ma m̀ dị ndụ ma m̀ nwụrụ anwụ.+ 21 N’ihi na ọ bụrụ na m dị ndụ, ọ bụ Kraịst ka m na-adịrị ya,+ ọ bụrụkwa na m nwụọ, ọ baara m uru.+ 22 Ọ bụrụ na m ka dịrị ndụ n’ụwa a,* m ga-arụkwuru Kraịst ọrụ. Ma, agaghị m ekwu nke m ga-ahọrọ. 23 Amaghị m nke m ga-ahọrọ na ha abụọ n’ihi na m chọkwara ka a tọhapụ m ka m gakwuru Kraịst,+ n’ihi na o doro m anya na ọ bụ ya bụ nke ka mma.+ 24 Ma, ihe ga-akacha abara unu uru bụ ka m ka dịrị ndụ n’ụwa. 25 N’ihi ya, ebe ọ bụ na obi siri m ike n’ihe a, ama m na m ka ga-anọ ndụ ma nọnyere unu niile ka unu wee na-emekwu nke ọma ma na-enwe ọṅụ n’ihi okwukwe unu, 26 ka ọ ga-abụ mgbe mụ na unu ga-anọ ọzọ, unu ga-enwe nnọọ ezigbo ọṅụ maka na unu na-eso ụzọ Kraịst Jizọs. 27 Na-akpanụ àgwà* otú kwesịrị ozi ọma gbasara Kraịst,+ ka ọ ga-abụ, ma m̀ bịara hụ unu ma ọ bụ na anọghị m ya, ka m nụ banyere unu na unu kwụsiri ike, nwee otu obi,* dị n’otu,*+ na-arụkọ ọrụ ọnụ ka unu na-enwe okwukwe n’ozi ọma, 28 gharakwa ikwe ka ndị na-emegide unu na-emenye unu ụjọ. Ihe a na-egosi na a ga-ebibi+ ha, ma ọ na-egosi na a ga-azọpụta unu.+ Ihe a si n’aka Chineke. 29 N’ihi na e meere unu ihe ọma a, ọ bụghị naanị ka unu nwee okwukwe na Kraịst, kamakwa ka unu taa ahụhụ n’ihi ya.+ 30 N’ihi na ihe ndị unu na ha na-alụ bụkwa ihe ndị unu hụrụ mụ na ha na-alụ,+ unu nụkwara ugbu a na mụ na ha ka na-alụ.
^ Na Grik, “daa.”
^ Na Grik, “ahụ́ m.”
^ Ma ọ bụ “Na-emenụ ka ụmụ amaala.”
^ Na Grik, “otu mmụọ.”
^ Na Grik, “nwee otu mkpụrụ obi.”